The 20 best health services 2019 ― DoneMaster မွနျမာ
202 Fitness Gym Yangon
ကျွန်မတို့ရဲ့ 25 by Y Fitness Studio မှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်....🙏🏻
အခု ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီ 25 by Y Fitness Studio မှာ ပါဝင်ကစားနိုင်မဲ့ Class အမျိုးအစားလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ 😍
- Fat Burn Class
- Core Class တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်...
ဒီ Class တစ်ခုချင်းစီနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးတွေကိုတော့ နောက်ပို့စ်လေးတွေမှာ ရှင်းပြပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် 25 by Y Fitness Studio Page လေးကို အမြဲစောင့်ကြည့်ပေးဖို့တော့ လိုမယ်နော် 😍❤️
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ဆေးခန်းဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားပါတယ်
Babies&apos; Barber Spa
Babies&apos; Barber Moms & Kids Spa မှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ သားသား မီးမီးလေးတွေအတွက် ခေါင်း အစ ခြေအဆုံး အလှအပနှင့်ကိုယ်လက်ကျန်းမာရေး အတွက် လသားအရွယ်မှစပီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အထိအားလုံးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ..သားသားမီးမီးတို့အတွက် သီးသန့် ကလေးကစားကွင်း၊ရေကူးကန်အခန်းများလဲထားရှိပါတယ်။ ...ကစားရင်းနဲ့လဲ ဆံပင်ညှပ်လို့ရတဲ့အတွက် ဆံပင်ညှပ်တာကြောက်တဲ့ ကလေးတွေအတွက်တော့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
နောက်ထပ်အဆင်ပြေတာလေးတစ်ခုကတော့ လူကြီးတွေ အတွက်ပါ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး ဝန်ဆောင်မှု အကုန်ရတာဆိုတော့ ကလေးတွေနဲ့အတူတူ Spa လာလို့ရသွားပီလေ...
ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဝါရင့် PT များနဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရင်း ပိုမိုကြံ့ခိုင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ Balance Fitness အနေနဲ့ PT sessions fees များကို 50 % အထိလျှော့ချပေးလိုက်ပီ ဖြစ်ပါ၍ အမြန်ဆုံးလာရောက်စာရင်းသွင်းပီး မိမိစိတ်ကူးထဲက Body shape ကိုပုံဖော်လိုက်ပါ😊
Central Clinic - Yangon
သားသမီး ရယူရန် ခက်ခဲနေပါသလား?
သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များနှင့် (အခမဲ့) ဆွေးနွေးလိုက်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များမှ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် လိုအပ်မည့် အချက်အလက်များကို သေချာစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
FX Exclusive Exercise VCD များကို Members
GYM or HOME မှပါ၊VCD အကူအညီဖြင့်ပိုမိုလေ့လာလေးကျင့်လို့ရအောင်ရည်ရွယ်ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
အရေးပေါ် သွားကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် ညဘက် အချိန်မတော် သွားကိုက် သွားနာဖြစ်နေသူများအတွက် မိုးပုလဲ (၂) သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးခန်းကို ၂၄နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ပေးထားလိုက်ပါပြီ။
မှတ်ချက် - ဆေးခန်း မလာမှီ မိနစ် (၃၀) ဖုန်းကြိုဆက်ပေးပါ။
Grand Plastic Surgery Service Myanmar
ရန်ကုန် မန္တလေး မြို့များတွင်အလှအပရေးရာများ ခွဲစိတ်နိုင်ပါပြီနော်
February လ အတွက်Discountဈေး များကတော့
ထုံဆေး ဖြင့်အသုံးပြုရသောခွဲ စိတ်ပြုပြင်မှုများ
အပေါ်မျက်ရစ်ဖော်ပေးခြင်း ၁၄သိန်း - ၉ သိန်း ၉ သောင်း
အောက်မျက်အိတ်ဖယ်ခြင်း ၁၄သိန်း - ၉ သိန်း၉ သောင်း
နှာခေါင်းဆီလီကွန် ထည့်ပေးခြင်း ၁၅သိန်း - ၁၂သိန်း
နှာခေါင်းထိပ်ပွ ပြုပြင် ပုံမှန်ဈေး ၁၅ သိန်း - ၁၃သိန်း၅သောင်း
နှာခါင်းဘေးကား ပုံမှန်၁၁ သိန်း-၁၀သိန်း,
နှာခါင်းထိပ်ပွ+ဘေးကား ပြုပြင် ပုံမှန် ၁၈ သိန်း -၁၆သိန်း၂ သောင်း
မေးစိ ဆီလီ ကွန်ထည့် ခြင်း ၁၅သိန်း - ၁၃သိန်း ၅သောင်း
ပါးချိုင့်ဖေါ်ခြင်း ၈သိန်း - ၇သိန်း ၅သောင်း
သင့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သွင်ပြင်ကို ထုတ်ဖော်လိုက်ပါ😎😎😎
ရဲရင့်ဖျတ်လတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့အတွက်ဆိုရင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပုံမှန်လုပ်ခြင်းကလည်း အထောက်အပံ့ပေးတယ်နော်👍👍👍… ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားမှ ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာပြီး သွက်လက်နေမှာပါ… ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုရှာနေရင်တော့ သွားလာရလွယ်ကူပြီးTrainer ကောင်းတွေရှိတဲ့ Myanmar Plaza Level4မှာတည်ရှိသော
POWER HOUSE FITNESS CLUB ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါ✅✅✅
အကောင်းဆုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့အတူ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Fitness Trainer များက အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ POWER HOUSE Team
Real Fitness ဟာ ရန်ကုန်ရဲ့ အထူးသီးသန့် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း တခုဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆိုလျှင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၄ခု ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ရွှေတောင်ကြာ၊ မင်းဒမ္မ ၊ဟိုတယ် G ရန်ကုန် နှင့် Sedona ဟိုတယ်ရန်ကုန် တို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Braces မတပ်ပဲသွားညှိကုသချင်သူတွေအတွက် Invisalign လို့ခေါ်တဲ့ World no.1 clear aligner နဲ့ သွားညှိကုသခြင်း ...😍😍
ဟိုးအရင်တုန်းကလို သွားတစ်ချောင်းစိုက်ရဖို့ ဘေးသွား၂ချောင်းကိုစတေးပြီးစားပစ်လိုက်စရာ မလိုတော့တဲ့ Dental Implant လို့ခေါ်တဲ့ သွားအမြစ်တုအစားထိုးသွားစိုက်ခြင်း ...☺️☺️
Hollywood Smile ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ပါတယ် ဆိုသူတွေအတွက် Dental Veneer ကုသမှု ...😃😃
အစရှိတဲ့ Smile Up Dental Clinic မှာရရှိနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သွားနှင့်ခံတွင်းကုသမှုတွေအကြောင်းကို စုံစုံလင်လင် ရှင်းလင်းပြောပြပေးထားတာဖြစ်လို့ ကြည့်ရှု နားဆင်ပေးကျပါဦးရှင်
ရန်ကုန်တွင် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းနင့် ကိုယ်ခံပညာများ သာမက မြန်မာ့လက် ဝေ့ များ ကိုပါ သင်ကြားပေးပါသည်။
Victorious Skin & Aesthetic Clinic - Yangon
🎈 Victorious Clinic မှ ကုသမူ( treatment) promotion အကြောင်းပြောပြချင်လို့ပါ..🎈
1️⃣ဝက်ခြံကြောင့်ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေအတွက် သတင်းကောင်းလေး လာပါပြီ 👏👏
ပျိုပျိုအိုအိုလူသားတိုင်းသည် ဝက်ခြံပေါက်နေတဲ့အချိန်လဲစိတ်ညစ်ရ 😞 ဝက်ခြံသက်သာပြီးအမာရွတ်ကျန်ခဲ့လျှင်လဲစိတ်ညစ်ရပြန်တယ် 😞..ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေကလဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြန်ရော(အမဲကွက်/အနီကွက်/ဖောင်းကြွအမာရွတ်/ချိုင့်ခွက်)တွေနဲ့ မျက်နှာမှာထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေတယ်..
📣အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေ အမာရွတ်ပြသနာတွေကို VC က ဖြေရှင်းပေးတော့မယ် 👍👍
🌺အမဲကွက်အမာရွတ်ကုသမူ တကြိမ် - 21000 Ks
🌺အနီကွက်အမာရွတ်ကုသမူ တကြိမ် - 28000 Ks
“လောကမှာ အဖိုးတန်ဆုံးရတနာက ဘာဖြစ်မယ်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ?”
“အိမ်ရဲ့ဆည်းလည်းလေးတွေ” ဖြစ်ကြတဲ့ ချစ်စဖွယ်ကလေးငယ်လေးများဟာ လောကမှာ
အဖိုးတန်ဆုံးရတနာများဖြစ်တယ်လို့ တင်စားရင်တော့ လွန်မယ်မထင်ပါဘူးနော်။
ခေတ်မီတိုးတက်နေတဲ့ ဆေးပညာနဲ့အညီ သဘာဝအတိုင်း ကလေးရရှိဖို့ခက်ခဲနေသူတွေအတွက်
ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားဆိုတာ အမျိုးသမီးရဲ့ဗိုက်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာ ပဋ္ဋိသန္ဓေတည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နည်းပြောရရင် ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ငန်းစဉ် In Vitro Fertilisation (IVF) နဲ့ သန္ဓေတည်စေခြင်း
In Vitro ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
yangon yoga house သည် yoga သင်ကြာပေးသော သင်တန်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြိုရြဲ့အချက်အချာကြသော နေရာတွင်တည်ရှိပါသည်။ကျွန်မတို့ Yoga House တွင် Yoga အမျိူးမျိုး နှင့်ကိုကာယလေ့ကျင့်ခန်းများကို လက်မှတ်ရထားသော နည်ပြဆရာများသည် မြန်မာဘာသာ မက အင်္ဂလိပ်ဘာသာများနှင့်ပါသင်ကြားပေးနေပါသည်။
Yankin Yoga yangon
ကျန်းမာလှပတဲ့ လူနေမှုဘဝကိုမက်မောသူတိုင်း စဉ်းစားမိကြတဲ့အထဲမှာ ယောဂဆိုတာပါပါတယ်။ ယောဂ ကျင့်စဉ်တွေဟာ ကလေးလေးကအစ အိုမင်းတဲ့အရွယ်ထိ အရွယ်စုံလေ့ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ယောဂ ကိုပိုပြီး ရွေးချယ်လာကြပါတယ်။
Certificate နဲ့ နံမည်ရပြီးသား ယောဂဆရာ ဆရာမတွေ သင်ပေးနေတဲ့ နေရာလေးပါ။ သင်္ဃန်းကျွန်း Studio နဲ့ စမ်းချောင်း Studio ဆိုပြီး၂ ခု ရှိပါတယ်။ လမ်းမတန်းမှာမဟုတ်လို့ ကားတဝီဝီသံတွေမရှိပဲ ယောဂလေ့ကျင့်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာလေးတွေပါ။ သင်္ဃန်းကျွန်း Studio က Myanmar Plaza နဲ့ဆို ၁၅မိနစ်လောက်၊ စမ်းချောင်း Studio က Dagon Center နဲ့ဆို ၅မိနစ်လောက်ပဲ ကားမောင်းရလို့ ရုံးကအပြန် ယောဂလေ့ကျင့်မယ်ဆို တအားအဆင်ပြေပါတယ်။ Yoga
ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်သင်ယူတာထက် ကောင်းတာကတော့ မရှိပါဘူး။ ပထမတကြိမ်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ပင်ပန်းတယ်လို့ထင်ရနိုင်ပါတယ်။ ပုံစံအသစ်တွေသင်ရမယ်။ စကားလုံးအသစ်တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တခုမှာ နေထိုင်ရမှာပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ပုံမှန်အသက်ရှူဖို့နဲ့ အနီးအနားက လူတွေထက် သင့်ကိုသင် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ဖို့ပါပဲ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အရာရာဟာပိုပြီးလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့်အကာင်းဆုံးကြိုးစားပြီး အောက်က အကြံပြုချက် ကို စိတ်ထဲမှတ်ထားလိုက်ထားလိုက်ယုံပါပဲ ။
⭐ Yoga ပုံမှန် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းက အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေပါတယ်။
⭐ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိတာ၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာလာတာ၊ ဖိအားတွေအောက်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေနိုင်လာတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာကို ကာကွယ်ပေးတာ၊ လက်ရှိ ဖြစ်တည်မှုကို အမှန်ကန်ဆုံး မြင်လာနိုင်တာ၊ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်လာလို့ ပိုကျန်းမာလာတာ၊ အသားအရေ ပိုကောင်းမွန် စိုပြေလာတာ၊ ကြွက်သားတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာလို့ ကိုယ်ခန္ဓာလှပလာတာ၊ အဆီတွေ လောင်ကျွမ်းပြီး ဝိတ်ကျလာတာ၊ ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်တာ သက်သာစေတာ . . .
✔ YUTTA YOGA မှာ ယောဂကို ဝါရင့်ယောဂဆရာမတွေနဲ့ စနစ်တကျ သင်ပြပေးနေပါတယ်။ သင်တန်းက သွားရလာရ လွယ်ကူတဲ့ လှည်းတန်းလမ်းမပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Zen Yoga & Zumba Class Schedule🧘‍♀️
(4.2.2019) Monday to (10.2.2019) Sunday) အထိ
(၁)ပတ်စာ 🙏Yoga & Zumba အတန်းချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။
☘️ဒီတစ်ပတ်အတန်းချိန် အပြောင်းအလဲလေးရှိလို့ 
အရင်ကြည့်ပြီး Confirm 📞 လေးလုပ်လိုက်နော်။
သန့်ဖြူစင် Dental Clinic Yangon
💯သန့်ဖြူစင်သွားဆေးခန်းတွင် အပေါ်ရှေ့သွား၁ချောင်းမရှိခြင်းကို ရှေ့ပလတ်စတစ်အတွင်းသတ္တုသွား(NiCr Facing) အသုံးပြုပြီးသွားအသေစိုက်ပေးထားခြင်းပါ။ရှေ့ဘက်လူမြင်နိုင်သောနေရာတွင် ဈေးနှုန်းသက်သာသော ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားသုံးပေးထားပြီး အတွင်းဘက်တွင် အကြမ်းခံသော သတ္တုအမျိုးအစား အသုံးပြုပြီး သွားစိုက်ပေးထားပါတယ်။
ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားသွားဖြစ်၍ အချိန်ကြာရင် အရောင်ပြောင်းနိုင်ပြီး ပေါက်နိုင်ပါတယ်။
✅သန့်ဖြူစင် Dental care